पौडेल परिवारमा एकपछि अर्को बज्रपात, को हुन् डिआर ? « Janata Samachar
प्रकाशित मिति : 14 June, 2019 9:23 am
काठमाडाैं । पूर्वशिक्षामन्त्री डिआर पौडेलको परिवारमा एकपछि अर्को बज्रपात भएको छ । पौडेलको दाजुको निधन भएको महिनादिन नपुग्दै डिआरको पनि हृदयघातका कारण निधन भएको छ ।
दाजुको निधनले शोकमग्न भएको परिवार र आफ्न्तलाई सम्हाल्न डिआर केही साता अघि स्याङ्जा जानुभएको थियो । दाइको परिवारलाई सम्हालेर फर्किँएको साता नबित्दै डिआरको निधन भएको छ ।
डिआरका ८० वर्षीय बुबा र आमा, पत्नी र दुई छोरी हुनुहुन्छ । राजनीतिमा सशक्त रूपमा अगाडि बढिरहेका बेला डिआरको निधन भएको छ ।
उहाँको निधनबाट परिवार विछिप्त भएका छन् । राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ता पनि भावविहिल बनेका छन् ।
को हुन् डिआर ?
बुबा : हरिप्रसाद पौडेल
आमा : हिमादेवी पौडेल
श्रीमति : गंगा बेलबासे
जन्म बि.स. २०२२ कार्तिक ४
हाल : माडी चितवन
जन्मस्थान : दरौ गाविस, कुन्चेवारी, स्याङ्जा
( २०३७ सालदेखि वामपन्थी विद्यार्थी आन्दोलन हुँदै कम्युनिष्ट पार्टीमा सक्रिय रहनुभएको थियो । मोहनबिक्रम सिंह र निर्मल लामाहरुले नेतृत्व गरेको नेकपा (चौथो महाधिवेशन) को विद्यार्थी संगठनको कार्यकर्ता हुँदै राजनीति सुरु गर्नुभएका उहाँ २०३९मा विद्यार्थी संगठनको चितवन जिल्ला सदस्य, २०४१ मा केन्द्रीय सदस्य हुँदै २०५१ मा तात्कालिन नेकपा (एकताकेन्द्र) विभाजन पछि अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी)को केन्द्रीय संयोजक समेत चुनिनुभएको थियो ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयवाट स्नातक, शहीद स्मृति क्याम्पस चितवनवाट आईए र माडी माविवाट एसएलसी गर्नुभएका स्व। पौडेलका दुई छोरी छन् । सादा र सरल जीवनशैली अपनाउँदै आउनुभएका पौडेलले हाल स्व. दिवाकर भुसालको स्मृति पुस्तकको सम्पादन गरिरहुनुभएको थियो । उहाँको आज बिहान करिब ७ बजे हृदयघातका कारण निधन भएको हो ।
‘बालबालिका संरक्षणको जिम्मेवारी राज्यले लिने’
काठमाडौं । नवनियुक्त महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङले बालबालिकाहरुको संरक्षणको जिम्मेवारी राज्यले लिने
सीमा सुरक्षाको बैठक सकियो
काठमाडौं । बुधबारबाट पोखरामा शुरु भएको नेपाल भारत सीमासुरक्षा बैठक शुक्रबार सकिएको छ । नेपालतर्फबाट